အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အဓိက ပွဿနာကို ထောကျပွလိုကျတဲ့ အိုဝငျနဲ့ ကီယှနျ - Myanmar Football Arena
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အဓိက ပွဿနာကို ထောကျပွလိုကျတဲ့ အိုဝငျနဲ့ ကီယှနျ
BT Sports ရဲ့ သုံးသပျသူတှေ ဖွဈကွတဲ့ မိုကျကယျ အိုဝငျနဲ့ မာတငျ ကီယှနျတို့ကတော့ ဂနျးနားလူငယျတဈသိုကျက ယူရိုပါလိဂျမှ စတနျးဒတျ လီဂြီအသငျးကို ဂိုးပွတျ ခမြှုနျးပွခဲ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အဓိက ပွဿနာကို ထောကျပွလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။
အိုဝငျနဲ့ ကီယှနျတို့က အာဆငျနယျအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ခွစှေမျးမပွနိုငျဖွဈနရေတဲ့ အကွောငျးအရငျးဟာ နီကိုလပျဈ ပပျပကွေောငျ့ဖွဈတယျလို့ တိုကျရိုကျ စှပျစှဲပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ပပျပမေပါဝငျတဲ့ ပှဲစဉျတှမှော ပိုပွီး ဟနျခကျြညီညှတျပွီး ကစားပုံလညျး ပိုကောငျးတယျလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။ ပပျပပေါဝငျတဲ့ ပှဲစဉျတှမှောတော့ ပပျပတေဈယောကျ အထိုငျကလြာဖို့ အသငျးဖျောတှကေ ဝိုငျးဝနျးပွီး ဖေးဖေးမမကစားနကွေရတာကွောငျ့ ကစားကှကျဟာ ထငျသလောကျ ခရီးမပေါကျဖွဈနတောလို့ သူတို့ရဲ့ ယူဆခကျြကို ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
“ကြှနျတျောတို့ အာဆငျနယျအသငျးအကွောငျး အကောငျးတှခေညျြး ပွောစရာရှိနပေါတယျ။ တဈခုတညျးသော မကောငျးတဲ့အခကျြက ပပျပပေါပဲ။ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ကြှနျတျော စိတျလှုပျရှားမိပါတယျ။ သူပွငျသဈမှာ ရှိနကေတညျးက ကြှနျတျော စောငျ့ကွညျ့နခေဲ့တာပါ။ အရမျးကောငျးတဲ့ကစားသမားပါ။ ဒီရာသီမှာ သူကစားနတောက မတူညီတော့ပါဘူး။ သူက အာဆငျနယျအတှကျ အရေးပါပွီး ကွီးမားတဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတဈခုပါ” လို့ အိုဝငျက ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
ကီယှနျကလညျး “ဒီနလေို့မြိုး သူ ကှငျးထဲဝငျလာပွီး ယုံကွညျခကျြအပွညျ့နဲ့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ကစားပွနိုငျတာမြိုး ကြှနျတျော ဆကျမွငျခငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနေ့ ပွိုငျဘကျက သာမနျအသငျးတဈသငျးပါ။ ဒါ ကြှနျတျော တှေးပူနမေိတဲ့အခကျြပါ။ ပပျပတေဈယောကျ အသငျးလူစာရငျးမှာ ဆကျရှိနမှောလား? သူ့အတှကျ လိုငျလီက မွောကျမြားတဲ့ ငှတှေရေသှားပါတယျ။ သူတို့ ခုခြိနျမှာ ရီမောနရေငျ ရီမောနလေောကျပါတယျ။ တဈခုရှိတာက ခုခြိနျဟာ သူ့အတှကျ အစောပိုငျးရကျတှပေါ။ နောကျပိုငျးမှာ အလှညျ့အပွောငျးတှရှေိလာမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ကြှနျတျော ဒီလို မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။ ဖွဈလာနိုငျမလားဆိုတာတော့ ကြှနျတျောလညျး မသိပါဘူး” လို့ ဆိုသှားခဲ့ပတယျ။
အာဆငျနယျအသငျးဟာ နီကိုလပျဈ ပပျပကေို ယခုရာသီအစမှာ အသငျးရဲ့ စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးဖွဈတဲ့ ပေါငျ ၇၂ သနျးနဲ့ ပွငျသဈကလပျ လိုငျလီအသငျးထံကနေ ချေါယူထားခဲ့တာဖွဈပွီး ကစားသမားဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ သှငျးဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှု ၂ ကွိမျပွုလုပျထားပါတယျ။
REF: BT Sports, Metro
BT Sports ရဲ့ သုံးသပ်သူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မိုက်ကယ် အိုဝင်နဲ့ မာတင် ကီယွန်တို့ကတော့ ဂန်းနားလူငယ်တစ်သိုက်က ယူရိုပါလိဂ်မှ စတန်းဒတ် လီဂျီအသင်းကို ဂိုးပြတ် ချမှုန်းပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အဓိက ပြဿနာကို ထောက်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အိုဝင်နဲ့ ကီယွန်တို့က အာဆင်နယ်အသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းဟာ နီကိုလပ်စ် ပပ်ပေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ တိုက်ရိုက် စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပပ်ပေမပါဝင်တဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ပိုပြီး ဟန်ချက်ညီညွတ်ပြီး ကစားပုံလည်း ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ပပ်ပေပါဝင်တဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ ပပ်ပေတစ်ယောက် အထိုင်ကျလာဖို့ အသင်းဖော်တွေက ဝိုင်းဝန်းပြီး ဖေးဖေးမမကစားနေကြရတာကြောင့် ကစားကွက်ဟာ ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်ဖြစ်နေတာလို့ သူတို့ရဲ့ ယူဆချက်ကို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“ကျွန်တော်တို့ အာဆင်နယ်အသင်းအကြောင်း အကောင်းတွေချည်း ပြောစရာရှိနေပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသော မကောင်းတဲ့အချက်က ပပ်ပေပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ သူပြင်သစ်မှာ ရှိနေကတည်းက ကျွန်တော် စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။ အရမ်းကောင်းတဲ့ကစားသမားပါ။ ဒီရာသီမှာ သူကစားနေတာက မတူညီတော့ပါဘူး။ သူက အာဆင်နယ်အတွက် အရေးပါပြီး ကြီးမားတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါ” လို့ အိုဝင်က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ကီယွန်ကလည်း “ဒီနေ့လိုမျိုး သူ ကွင်းထဲဝင်လာပြီး ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကစားပြနိုင်တာမျိုး ကျွန်တော် ဆက်မြင်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ပြိုင်ဘက်က သာမန်အသင်းတစ်သင်းပါ။ ဒါ ကျွန်တော် တွေးပူနေမိတဲ့အချက်ပါ။ ပပ်ပေတစ်ယောက် အသင်းလူစာရင်းမှာ ဆက်ရှိနေမှာလား? သူ့အတွက် လိုင်လီက မြောက်များတဲ့ ငွေတွေရသွားပါတယ်။ သူတို့ ခုချိန်မှာ ရီမောနေရင် ရီမောနေလောက်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ခုချိန်ဟာ သူ့အတွက် အစောပိုင်းရက်တွေပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ အလှည့်အပြောင်းတွေရှိလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီလို မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး” လို့ ဆိုသွားခဲ့ပတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ နီကိုလပ်စ် ပပ်ပေကို ယခုရာသီအစမှာ အသင်းရဲ့ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြစ်တဲ့ ပေါင် ၇၂ သန်းနဲ့ ပြင်သစ်ကလပ် လိုင်လီအသင်းထံကနေ ခေါ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကစားသမားဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ သွင်းဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှု ၂ ကြိမ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။